ငါစဉ်းစားတယ်ဘာကိုစဉ်းစားကြသည်? စိတ်ကိုထိန်းချုပ်မြင့်တက် - သတင်း Rule
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ငါစဉ်းစားတယ်ဘာကိုစဉ်းစားကြသည်? စိတ်ကိုထိန်းချုပ်မြင့်တက်” တွမ်အိုင်ယာလန်ကရေးသားခဲ့သည်, စနေနေ့ 22 သြဂုတ်လအပေါ် The Observer သည် 2015 18.30 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Ahundred လျှပ်, ငါ၏ဦးရေပြားဆန့်ကျင်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖိအားပေးနေကြသည်နှင့်ဆားရေနှင့်ကလေးခေါင်းလျှော်ရည်အရောအနှောငါ့ကျောချယိုသည်. အဆိုပါခရီးသွားရာတွင်-ပျေါမှာငါ့နည်းနည်းလှုဦးနှောက်ထဲမှာငါ့ရှေ့မှာအတွက် screen ပေါ်မှာ graph တစ်ပျက်စေခင်းကျင်းအားဖြင့်ကိုယ်စားပြုနေကြသည်. ငါသည်ငါ့မျက်စိပိတ်ဖို့နှင့်ဖြေလျော့လာတဲ့အခါ, ထိုရှုပ်ထွေးချပြီးကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်နှင့်ခှသပ်ရပ်အနည်းငယ်လှိုင်းတံပိုးဖြစ်လာ.
နောက်တစ်ခု, ဒီနေရာမှာနယူးကာဆယ်တက္ကသိုလ်ကဖွင့်မှာသိပ္ပံပညာရှင်များ နှောက်နှင့်အာရုံကြောသိပ္ပံ၏အင်စတီကျု ငါ့ဦးခေါင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်သေးငယ်တဲ့လျှပ်စစ်များလုပ်ရန်ဆွဲဆောင်, transcranial သံလိုက် stimulation အတွက်လို့ခေါ်တဲ့နည်းလမ်းကိုသုံးပြီး (TMS). ငါ၏အဦးနှောက်ရဲ့မော်တာ cortex ၏ဘယ်ဘက်မှသူတို့ device ကိုပစ်ခတ်ခဲ့လျှင်အနည်းငယ်မီလီမီတာ, ကျွန်မဘာမှမခံစားရ. ငါ၏အ "ချိုမြိန်ပွဲချင်းပြီး" Hit, သို့သော်, သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အညီ၏, ငါ့လက်မောင်းကိုလှုပ်ရှား.
ကျနော်အများကြီး "စိတျ control" ကိုနည်းပညာကိုခေါ်ကျောထောက်နောက်ခံကိရိယာ၏သရုပ်ပြဒီမှာရယ်. အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်လူသားမြားတယောက်တည်းသာအတွေး၏တန်ခိုးကို အသုံးပြု. စက်ရုပ် Avatar ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြောင့်အမြန်ဆုံးဖွစျလိမျ့မညျယုံကြည်, သို့မဟုတ်တောင်မှတိုက်ရိုက်အခြားသို့လူတစ်ဦးရဲ့စိတ်ကိုကနေအကြံအစည်သို့မဟုတ်ရည်ရွယ်ချက်များစေလွှတ်မည် - ကဲ့သို့သောဘာသာဝါဒသိပ္ပံ-Fi ဇာတ်ကားပရိသတ်များသည်တော်တော်ကြောက်စရာအလားအလာ စကင်နာ, လူ့အဖွဲ့အစည်းစိတ်ကိုထိန်းချုပ်မှုနှင့် telepathic အင်အားကြီးနှင့်အတူတစ်ဦးလက်ရွေးစင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားရာ.
တချို့ကတောင်မှလူတစျနေ့ကအတူတူသူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ကိုချိတ်ဆက်မညျဟုထငျ, အင်တာနက်ကနေတဆင့်, တစ်ကြီးမားစုပေါင်းစူပါဦးနှောက်ကိုဖွဲ့စည်းရန်.
ဒီနေရာတွင်နယူးကာဆယ်အတွက်, သုတေသီများထိုကဲ့သို့သောနည်းပညာကိုအကြောသေသို့မဟုတ်မသန်စွမ်းမှုကြောင့်ထိခိုက်သည်လူများတို့အားလှုပ်ရှားမှု restore ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်. နောက်ထပ်ဆန္ဒပြပွဲအတွက်, ငါသည်ငါ့လက်ချောင်းရွှေ့အဖြစ်လျှပ်လျှပ်စစ်စီးလှုပ်ရှားမှု၏မုန်တိုင်းငါ့လက်ရုံး၏အာရုံကြောနှင့်ကြွက်သားမှဆင်းသည်ငါ့ဦးနှောက်ကနေလာမယ့် detect. ငါသည်ငါ့လက်ကြွက်သားအတွက်တစ်ဦးချင်းမော်တော်ယာဉ်ယူနစ်၏ crackle ပစ်ခတ်နားထောငျတျော, ဆင်းရဲပီမှတဆင့် amplified.
ဒီမှာအသင်းကလူစက်ရုပ်ခြေလက်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကူညီထိုကဲ့သို့သောအချက်ပြမှုများကိုအသုံးပြုနေ, သို့မဟုတ်ပျက်ဆီးအာရုံကြောကိုကျော်လွှားရန်ပြန်ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့အာရုံကြော Impulse reroute. ထိုကဲ့သို့သော devices တွေကိုဦးနှောက်ကကွန်ပျူတာ interface များကဲ့သို့လူသိများလျက်ရှိ, သို့မဟုတ် BCIS, နှင့်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းလျှင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီ.
နိုင်ငံတကာတွင်, အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးခြေလှမ်းနောက်ထပ်သွားကြပြီ, တစ်ဦးနှောက်-To-ဦးနှောက် interface ကိုဖန်တီးရန်အခြားသို့တစျဦးနှောက်ကနေသတင်းအချက်အလက်ပေးပို့ခြင်း, သို့မဟုတ် BBI. အခြားသူတစ်ဦးမှထိုသူတို့လိုလားသည့်အခါသုတေသီများပင်လူတစ်ဦးသို့ပြောင်းရွှေ့ရာ၌ခန့်ထားပြီ, အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ဦးနှောက်ကိုဆက်သွယ်အသုံးပြု.
Greg Gage သစ်ကို '' လူ့လူ့မှ '' interface ကိုပြသ.
"စိတ် control" ကိုအမှတ်တမဲ့ပဲတာကတော့မဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်အမှန်တကယ်မဟုတ်ဘဲလွယ်ကူတဲ့. သင်ကဝယ်လို့နိုင် ပဲကျော်စတာလင်ပေါင် 165 အွန်လိုင်းမှာ "DIY များလူ့-လူ့ interface ကို", လူငယ်တွေကိုမှ neuroscience ပိုမိုရရှိနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ပရောဂျက်၏အစိတ်အပိုင်း. အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင် Greg Gage ဖြင့်ဗီဒီယိုထဲမှာ, နှစ်ဦးအပေါ်အဆင့်စေတနာ့ device ကိုချိတ်ဆက် - အနည်းငယ်ကြိုးတွေထက်အနည်းငယ်ပို, အချို့ flash circuitry နှင့်လက်ပ်တော့ပ်. တစျဘာသာရပ်သူတို့ရဲ့လက်မောင်းကို curls လာတဲ့အခါ, အခြားလည်းသူတို့ရဲ့လက်မောင်းကိုများအဖြစ်ရပ်တန့်ဖို့မတတ်နိုင်သည်.
"သင်သည်သင်၏အခမဲ့အလိုတော်ဆုံးရှုံးအခြားသောတစ်စုံတစ်ယောက်သည်သင့်အေးဂျင့်ဖြစ်လာသည့်အခါ, ကနည်းနည်းထူးဆန်းခံစားရပါဘူး,"Gage ကသူ့လူငယ်စေတနာ့အားမိန့်.
ဒီနည်းပညာ၏ဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းမှာ, အမှုအရာအနည်းငယ် weirder ရ. တွင် 2013 Harvard Medical School တို့မှသုတေသီများသူတို့ခဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာ တစ်ဦးကြွက်ရဲ့အမြီးပြောင်းရွှေ့ရန်လူသားတစ်ဦးစေတနာ့ဝန်ထမ်းခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ device ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ တစ်ဦးတည်းအတွေးကနေတဆင့်. ထိုနှစ်တွင်ပင်, ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်ကနေအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင် အင်တာနက်ကနေတဆင့်ဦးနှောက်ကိုအချက်ပြမှုများကိုစလှေတျတျော တစ်ဦး electroencephalography ဝတ်ဆင်တယောက်တဦးချင်းအနေဖြင့် (EEG) တစ် TMS ကိရိယာဖြင့်အခြားမှနားကြပ်, အဝေးမှလက်ခံရရှိရဲ့လက်လှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းချုပ်. လူတစ်ဦး, တစ်ကွန်ပြူတာဂိမ်းကိုကြည့်, ရန်သူဒုံးကျည်ပစ်ချရန်သူတို့လက်ရွေ့လျားစိတ်ကူး. သူ၏အကြံအစည်တို့ကိုသင့်လျော်တဲ့အချိန်မှာခလုတ်ထိမှအခြားသူတစ်ဦးရဲ့လက်ချောင်းနှိုးဆွပေး.
ထိုအခါပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား၏ပထမဆုံးဘောလုံးကိုကန်သောသူအကြောသေဆယ်ကျော်သက်ရှိပါတယ်, သူ့ရဲ့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်သောတစ်ဦး exoskeleton ဝတ်ဆင်. နှင့်ဘာစီလိုနာအတွက် Starlab စက်ရုံမှာသိပ္ပံပညာရှင်များ, အဘယ်သူသည် ပြောဆိုချက်ကိုသရုပ်ပြရှိသည်ဟု "သတင်းအချက်အလက်မသိဂီယာ" - အချင်းချင်းတယောက်အောက်တယောက်စိတ်ကိုအထဲကစကားလုံး "hola" ပေးပို့ခြင်း, သူတို့ရဲ့အာရုံကို အသုံးပြု. ဖြစ်စေလူတစ်ဦးမပါဘဲ.
ထိုကဲ့သို့သောစမ်းသပ်ချက်နားလည်ပါတယ်လူများစွာကအောခံစားရစေ. အမေရိကန်စစ်တပ်၏ဤဒေသရှိသုတေသနလုပ်ငန်းငွေကြေးထောက်ပံ့နေသည်သာကြောက်စရာအလားအလာအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်မှုများမှ add ကြောင်းကောလာဟလ. လူတို့သည်မိမိတို့အလိုတော်ဆန့်ကျင်ရွှေ့သို့မဟုတ်လုပျဆောငျဖို့အတင်းအကြပ်နိုင်, သို့မဟုတ်မိမိတို့၏ဦးခေါင်းကိုထဲကနေဖြည်ချသူတို့ရဲ့အတှငျးအကဆြုံးအကြံအစည်နှင့်ခံစားချက်များများ?
မှာအသုံးပြုတဲ့စက်ရုပ် exoskeleton 2014 ကမ္ဘာ့ဖလားဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား.
အဖြေ, အခုအချိန်မှာ, အဘယ်သူမျှမလုနီးပါးဆက်ဆက်ဖြစ်ပါသည်. အသေးစိတ်မှာကြည့်သောအခါတောင်မှအများဆုံးအမြင်အားလေးနက်စမ်းသပ်မှုအနည်းငယ်အတွင်းဖြစ်နိုင်. ဘာစီလိုနာစမ်းသပ်မှု, ဥပမာအားဖြင့်, လူတစ်ဦး "hola" စိတ်ထင်နှင့်လက်ခံသူထို့နောက်၎င်းတို့၏ဦးခေါင်း၌အတွင်းသံကဲ့သို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားသိလျှင်အသံစေခြင်းငှါ,. အဖြစ်မှန်အလွန်ခြားနားသည်: ကို "ပေးပို့သူ" မိမိတို့လက်သို့မဟုတ်ခွကေိုရွေ့လျားစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းဖြင့် Binary Code ကိုအတွက်စကားလုံးထွက်စာလုံးပေါင်း - တယောက်လှုပ်ရှားမှု "0" ကိုဆိုလို, အခြားရည်ရွယ် "1". အဆိုပါ "လက်ခံ" ထို့နောက်ဦးနှောက်ကိုတက်ကြွစေ၏ပုံစံနှစ်မျိုးလက်ခံရရှိ: တစ်, သူတို့ကိုအလင်းနွယ်ရိပ်မိစေရာ, ထို 1s ကိုယ်စားပြု, ထိရောက်မှုမရှိကြောင်းနှင့်အတူအခြားသွေးခုန်နှုန်းကို0စက္ကန့်ကိုကိုယ်စားပြု. ဒါကြောင့်, အမှန်, လူတစ်ဦးရွေ့လျားစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်စကားလုံးထွက်စာလုံးပေါင်း, နှင့်လူတစ်ဦးနဲ့အစွမ်းထက် Morse code ကိုတစ်ဦးကြင်နာသူတို့၏ဦးခေါင်းသို့ပျက်သောစပါးတယ်. မှတ်သားဘွယ်ဖြစ်သော, ဒါပေမယ့်ခဲလှ၏ အဆိုပါ Matrix.
အဆိုပါပြဿနာသည်, လူသားတွေအတွက်ဦးနှောက်-To-ဦးနှောက်နည်းပညာကိုလက်ရှိတွင် Non-ထိုးဖောက်နည်းပညာများမှကန့်သတ်တာဖြစ်ပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောနယူးကာဆယ်အတွက်ငါ့ဦးခေါင်းကျော် draped သော slimy EEG device အဖြစ်. ဦးခေါင်းခွံပြင်ပတွင်ကနေ, ထိုကဲ့သို့သော devices များကိုသာဦးနှောက်၏အပြင်ဘက်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်လှုပ်ရှားမှု၏သီ detect နိုင်, ဦးနှောက်အတွက်နက်ရှိုင်းသောလှုပ်ရှားမှု၏သို့မဟုတ်ကြီးမားသောချပြီးကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်.
"EEG နှင့်အတူဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု Reading အားကစားကွင်းပြင်ပ၌ရပ်လျက်နေဘောလုံးပွဲစဉ်နောက်တော်လိုက်ရန်ကြိုးစားနေသကဲ့သို့ဖြစ်၏,"ဟုဒေါက်တာအန်ဒရူးဂျက်ဆင်ကပြောပါတယ်, နယူးကာဆယ်အင်စတီကျူအကြီးတန်းသုတေသနကိုသူချင်း. တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာဂိုးသွင်းယူနေသည့်အခါ "ခင်ဗျားပြောနိုင်. ဒါပေမဲ့လည်းအဲဒီအကြောင်းပါပဲ။ "
လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်လုပ်ဆောင်ချက်ရှာဖွေပြီးမျိုးပွားဖို့ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်မှုအလွယ်ကူဆုံးအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. အကြံအစည်နှင့်ခံစားချက်တွေကိုဖမ်းယူ, မြင့်မားတဲ့တိကျတဲ့ပါဝင်ရာ, စည်းချက်ကျလှုပ်ရှားမှု, အလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့အရာဖွစျသညျ.
ကို receiver ရဲ့ဦးနှောက်သို့အာရုံပေးပို့ခြင်းပင်လျော့နည်းတိကျသောဖြစ်ပါတယ်. transcranial သံလိုက် stimulation အတွက်, ငါ့လက်ရုံးအကွောဆှဲစေတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့ device ကို, ဦးနှောက်၏အလွန်တိကျသောဒေသများရှိလျှပ်စစ်များလုပ်ရန်ဆွဲဆောင်နိုင်, သာအဲဒီဒေသတွေအတွက်အာရုံခံမှုဖှငျ့. ဒါပေမယ့်နောက်တဖန်အ, ထိုကဲ့သို့သောစကားလုံးများနှင့်အကြံအစည်အဖြစ်ရှုပ်ထွေးသောအာရုံဖန်တီးခြင်းဝေးအဲဒီကိရိယာတွေရဲ့လက်ရှိအတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်ဖြစ်ပါသည်.
ဂျက်ဆင်ကပြောပါတယ်: "တပြင်လုံးကိုတွင်နည်းပညာ [အချက်ပြမှုများကိုပေးပို့] အသံဖမ်းသည်ငါတို့သည်နည်းပညာထက်လျော့နည်းတိကျသောဖြစ်ပါတယ် - သူကခင်ဗျားကိုနှိုးဆွရာကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲသည်. ငါတို့သည်မယ့်ဦးနှောက်ကို function ကို၏ဘာသာစကားနှင့် ပတ်သက်. တာကိုမသိ - ကျွန်တော်တို့ဟာမတူညီတဲ့ဒေသတွေကိုနှိုးဆွအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးလိမ့်မည်သောအရာကိုအာရုံခံစားမှုမမသိဘူး "။
Giulio Ruffini, ကို "hola" စမ်းသပ်မှုအကြံကိုကြံဖို့ကူညီနေသူ, စစ်မှန်သောအကြံအစည်သို့မဟုတ်မက်ဆေ့ခ်ျများထုတ်လွှင့်ကပြောပါတယ်, မဟုတ်ဘဲ0စက္ကန့်နဲ့ 1s ၏တွေက sequence ထက်, ထိုးဖောက်နည်းပညာကံသာဖွယ်ရှိသည် - ကိုတိုက်ရိုက်ဦးနှောက်သို့ devices များရဲ့ implants.
"ဒါဟာဝေးသောပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ် - ဦးနှောက်တစ်ခုခုရိပ် မိ. နှင့်တစ်စုံတစ်ဦးအတွက်အတိအကျအတွေ့အကြုံကိုလှုံ့ဆော်. ဒါဟာတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ထိုးဖောက်နည်းပညာများနှင့်အတူသရုပ်ပြခဲ့သည်, ငါကမကြာမီလွန်းလူသားမြား၌ပြုကြလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ "
ထိုကဲ့သို့သောအစားထိုးထည့်မိနစ်ဆေးထိုးအပ်ကဲ့သို့လျှပ်ရာပေါင်းများစွာဆံ့, တစ်ဦးချင်းစီအာရုံခံစောင့်ကြည့်ရန်သို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်ဖို့ဦးနှောက်ထဲမှာတိကျသောနေရာများတွင်ထားရှိ. သုတေသီများသည်ယခုနှစ်ထိုးဖောက်နည်းပညာကိုသုံးပြီးသုံးမျောက်ရဲ့ဦးနှောက်ချိတ်ဆက်ထား, နှင့်တိရိစ္ဆာန်များလျင်မြန်စွာတာဝန်များကိုအတွက်ပူးပေါင်းဦးနှောက်လုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်မှလေ့လာသင်ယူတွေ့. အလားတူစမ်းသပ်မှုအတွက်, တွင်း cortical devices များနှင့်ဆက်နွှယ်လေးကြွက်တစ်ခုတည်းတိရိစ္ဆာန်များထက်ပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်အထိတာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်.
Ruffini လူသားတွေအတွက်အောင်မြင်ရန်တယ်ဘာကိုအစားထိုးထည့်စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ပါသည်. "ဒါဟာအများကြီးပိုပြီးအစွမ်းထက်သည်. ယခုပင်လျှင်သင်အမှုအရာလိုက်ခြင်းဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည့်စက်ရုပ်ကိုထိန်းချုပ်စ​​ေတဲ့မျက်နှာပြင်တခုလူသားတို့ထံဆက်သွယ်နိုင်သည်. ကျနော်တို့အလုံအလောက်အစွမ်းထက်ဖြစ်ကြောင်းဦးနှောက်အကြားအချိတ်အဆက်တည်ထောင်မယ်ဆိုရင်, အဲဒီလူတွေကိုတကယ်တည်းနှင့်အတူတူပင်လူတစ်ဦးအဖြစ်ယူဆနိုင်? ကျွန်တော်ပင်အခြားမျိုးစိတ်နှငျ့ဆကျသှယျနိုငျပါ?"
မှ Miguel Nicolelis, လယ်ပြင်၌ရှေ့ဆောင်တစ်ဦး, အကယ်. ထိုးဖောက်နည်းပညာကိုလုံခြုံဘေးကင်းနဲ့ကျင့်ဝတ်ရခွင့်ပြုချက်ယူဆခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်, "သင်၏အကြံအစည်နှင့်တစ်ကားကိုထိန်းချုပ်တူတစ်ခုခုလုပ်နေတာတ​​ရားမျှတစွာသေးအဖွဲဖြစ်လိမ့်မည်". သူ၏စာအုပ်ထဲတွင် နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရေးထက် ကျော်လွန်., Nicolelis "သင်၏ဧည့်ခန်းထွက်ခွာမရှိဘဲအချင်းချင်းဂြိုဟ်ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုထိ၏အာရုံတွေ့ကြုံ" လူ "သူတို့ဘိုးဘွားချက်မှတ်ထားမှုဘဏ်ကို download" သို့မဟုတ်တဲ့အနာဂတ်မျှော်မှန်း. ဖုန်းတွင်, သို့သော်, သူကပိုပြီးလက်တွေ့ကျကျဖြစ်ပါသည်. "အဆင့်မြင့်အမိန့်ကိုဦးနှောက် functions များမှတဆင့်ကူးစက်သောခံရဖို့မရရှိနိုင်ကြသည်. ဒါကြောင့်တစ်ဦးရုပ်သံလိုင်းလျှော့ချခြင်းကိုမနိုင်လျှင်, ကမှတဆင့်ကူးစက်သောမရနိုင်ပါ။ "
Nicolelis လိုပဲ, ဤမြေကွက်၌အလုပ်လုပ်ကိုင်အများအပြားအားလုံးဖြစ်နိုင်ချေဖြစ်နိုင်ခြေဖျော်ဖြေလို, နည်းပညာရဲ့ကန့်သတ်မှုနှင့်ဦးနှောက်ရဲ့ရှုပ်ထွေးနေသော်လည်း. သို့မဟုတ်ပုန်း, အခါအင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့သိပ္ပံနည်းကျကျင့်ဝတ်ကော်မီတီ ထွန်းသစ်စ "neurotechnologies" သို့ကြည့်ရှု, ထိုကဲ့သို့သော BCIs နှင့် BBIs အဖြစ်, သူတို့ပြုသောအမှုနှင့်အဘယ်အမှန်တကယ်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုယခုမဆိုစည်းမျဉ်းအရေးယူမလိုအပ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကြီးလွန်းအားကြီးစေခြင်းငှါအဘယျသို့အကြားကွာဟမှုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်.
စိတ်ကို-reading EEG ပစ္စည်းတွေကိုဖန်တီးရန်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကြိုးပမ်းမှုများအကြီးအကျယ် gimmicks ကြပြီ, ငါသည်ထိုဗီဒီယိုများကိုအနေဖြင့်စတာလင်ပေါင် 165 DIY များလူ့-လူ့ interface ကိုကြိုးစားသောအခါ, ကိုယ့်ကိုငါ့သူငယ်ချင်းတွေလျှပ်စစ်ရိုက်ခတ်မှုပေးရန်ဟန်. ဒါဟာအားလုံးစစ်မှန်စွာတောက်ပသောသိပ္ပံနှင့်မှန်းဆဖောင်းပွနေတဲ့ရှုပ်ထွေးရောအနှောင့်ထည့်သွင်း.
မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ထိုးဖောက် devices တွေကိုသင်အနီးရှိဆေးရုံသို့လာမယ့်ခံရဖို့များပါတယ်, နောက် ... ပြီးတော့. "ကျူးကျော်နည်းပညာများတစ်ဦးကိုယ်လက်အင်္ဂါပျောက်နေသို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းသေသောသူတစ်ဦးလူနာတွေအတွက်အမှန်တကယ် သာ. ရွေးစရာရှိပါတယ်,"ဂျက်ဆင်ကပြောပါတယ်. "သူတို့ကသူတို့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာတစ်ခုခုဝတ်ခြင်းရှိချင်ဘဲနေနိုင်မည်အကြောင်း, သူတို့အမြဲတမ်းနဲ့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ထည့်သွင်းတစ်ခုခုချင်ပေလိမ့်မည်။ "ကျွန်မဆင်းရဲသားကိုဦးခေါင်းကနေဒီနွေရာသီမှာရဲ့အနည်းဆုံးရှာသောအခါ-ပြီးနောက် headwear ဖယ်ရှားရန်နှင့်အမျှ, ငါသည်သူ၏အမှတ်တွေ့မြင်. စိန်ခေါ်မှုယခုဆယ်စုနှစ်များစွာအရေပြားအောက်အရပ်, လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်နိုင်သောဘေးကင်းလုံခြုံအစားထိုးထည့်ဖန်တီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်.
အခြားသူများ, Ruffini အပါအဝင်, လူသားမြားကိုပိုမိုအဓိပ္ပါယ်ရှိစွာဦးနှောက်သို့လင့်ထားသည်နိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်စိတ်ချဆက်လက်တည်ရှိ, ဖြစ်ကောင်းကြိုးမဲ့, ဤရာစုအတွင်း.
"လူသားတွေဟာဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်လိုအပ်သည်. ကျနော်တို့ကအမြဲတမ်းကျွန်တော်လုပ်နိုင်နှင့် bandwidth ကိုကယျြဝနျးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြ - ဘာသာစကားသို့မဟုတ်စာတစ်စောင်နှင့်အတူ, ဖုန်းသို့မဟုတ်အင်တာနက်. ဒါဟာယူစေခြင်းငှါ 50 သို့မဟုတ် 100 ကျနော်တို့အကြံအစည်ဆက်သွယ်မတိုင်မီနှစ်, ဒါပေမယ့်ကျနော်ကမလွှဲမရှောင်လို့ထင်ပါတယ်။ "
■ဦးနှောက်အတွက်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုဦးရေပြားတွင်ကျင်းပခဲ့သည်ကိရိယာအားဖြင့်တွေ့ရှိသည်, ထိုကဲ့သို့သော electroencephalography အဖြစ် (EEG). ဒါဟာအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုပုံစံများကိုတစ်ညွှန်ပြပေးသည်, အဓိကအားဖြင့်ပြင်ဦးနှောက်၏ဒေသများရှိ.
■အဆိုပါဒေတာ amplified ဖြစ်ပါတယ်, ပြုပြင်, နှင့်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, နှင့်အခြားဦးနှောက်သို့ကူးစက်နိုင်သောအချက်ပြအဖြစ်ပြောင်းလဲ.
■ transcranial သံလိုက် stimulation အတွက် (TMS) ဦးနှောက်၏ဒေသများတွင်လျှပ်စစ်လက်ရှိလုပ်ရန်ဆွဲဆောင်ဖို့သံလိုက်စက်ကွင်းကိုအသုံးပြုသည်, "မီး" ကိုအာရုံခံကိုနှိုးဆွ. ဤနည်းသည့်အတွက်ဦးနှောက်သို့ Impulse ပေးပို့ခြင်းအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနိုင်ပါသည်သောအာရုံအလွန်အမင်းကန့်သတ်ထား, ဥပမာကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်အလင်းနွယ်၏အမြင်.
invasive ဦးနှောက်-To-ဦးနှောက် interfaces
သေးငယ်တဲ့င်တစ်ဦးမှအထူး chip ကို■, ဆေးထိုးအပ်ကဲ့သို့လျှပ်ဦးနှောက်သို့ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ဦးခေါင်းခွံမှ fixed ဖြစ်ပါတယ်. လျှပ်တစ်ဦးချင်းအာရုံခံ၏လှုပ်ရှားမှုကိုတိုင်းတာရန်အတွက်လုံလောက်သောတိကျနှင့်အတူထားရှိနိုင်ပါသည်.
■ electrodes ဦးနှောက်၏တိကျသောဒေသများလှုံ့ဆော်ရန်ထားရှိနိုင်ပါသည်. TMS ထက်မျ​​ားသော်လည်းပိုတိကျတဲ့, အကြံအစည်သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်ထားသည့်လှုပ်ရှားမှုကဲ့သို့သောရှုပ်ထွေးသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုနှိုးဆွနေဆဲမသေးဖြစ်နိုင်.
37734	0 အပိုဒ်, ရှာဖှေတှေ့, အင်္ဂါရပ်များ, အင်တာနက်ကို, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနများ, neuroscience, သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး, သိပ္ပံ, နည်းပညာ, The New ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, အဆိုပါ Observer, တွမ်အိုင်ယာလန်
← Bower & Wilkins တို့ P5 ကြိုးမဲ့နားကြပ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Huawei က Honor:7ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: လျှပ်စစ်ပြက်-အစာရှောင် fingerprint ကို scanner ကိုအတူ-range ကိုအစိုင်အခဲလယ်ပိုင်း →